spotify pakupedzisira inowedzera yakakumbirwa-refu chimiro kune yayo admin app ine mashoma fanfare
Kuru Nhau & Ongororo Spotify pakupedzisira inowedzera chinongedzo chakakumbirwa-refu kune yayo Android app ine mashoma fanfare
Kuzvidzivirira kubva pamakwikwi anowedzera ane hukasha kubva pane zvaunoda zve Apple , Amazon , Google , uye Deezer , wepasi rose mutungamiri weindasitiri yekushambadzira mimhanzi inogara iri kuyedza zvinhu zvitsva , kuenda kusvika pakuyedza iri-mumba zvigadzirwa izvo zvinogona kuzvitendera kudzora uye kuongorora ako ari-mumota ekuteerera mapatani.
Izvo & apos; s ipfungwa dzakanaka-dzinovhuvhuta (uye zvirokwazvo kwete nenzira yakanaka) iyo iyo & maapos; yakatora Spotify iyi refu kuti iwedzere kusanzwisisika yakakosha yekurara timer ficha kune yayo Android app. Mushure mezvose, chikuva chave chiripo kubvira 2008, uye vashandisi havana & apos; havana kunyara kuratidza kusashivirira kwavo uye kusagutsikana nekushaikwa kweichi chinoshanda chinoshanda pamusoro pemakore.
Kuti uwane pfungwa yekuti vanhu vaida sei kurara vachitamba mimhanzi yavo yavanofarira paSpotify, iwe unongoda kutsvaga nekukurumidza kutsvaga kweGoogle Play. Zvinokutora iwe masekondi mashoma kuti uone kuti kune akawanda-echitatu-bato maapplication anowanikwa kuburikidza neyekutsva hofori & apos; s yepamutemo Play Store nechinangwa choga chekugonesa yekurara timer kugona kweyaunofarira mimhanzi yekushambadzira sevhisi. Iyo yakanzi 'Kurara Nguva yeSpotify, Mumhanzi, uye Vhidhiyo' ine pamusoro pe500,000 inoiswa kuzita rayo, nepo imwe 'Kurara Nguva' app iyo inoshanda neYouTube, Google Play Music, TuneIn Radio uye 'zvimwe zvakawanda' pamusoro peSpotify yakatokwanisa kuputsa miriyoni imwe yekurodha.
Pakupedzisira, hapachina chikonzero chekupindana nedambudziko iro, sekuonekwa kwaro Android Mapurisa pane akati wandei Reddit tambo . Iyo yemuno Spotify yeiyo Android yekurara timer ficha iri nyore kushandisa, yakatwasuka, uye nyore sezvaungatarisira.
Iwe unofanirwa kuiwana zviri nyore nekutepa pane matatu-madhizaini icon mune yako Ino Yokutamba skrini (pazasi pe & apos; share 'sarudzo), ine masisitimu enguva dzakasiyana apo foni yako inogona kungomisa odhiyo yako (kubvira pamaminitsi mashanu kusvika paawa) , pamwe nesarudzo yeku'enda kunorara 'mushure mekumhanyisa imwe track. Kana iwe uchikwanisa & apos; yekuwana ficha yacho parizvino, iwe unofanirwa kungomirira kuburitswa kwakawanda kweiyo yazvino Spotify vhezheni.
Izvo & apos; s zvakare inofanirwa kuratidza kuti iyo app haina & apos; haina hunyanzvi inotsigira kuita uku paIOS parizvino, asi maPhones anouya neiyo Clock app yakagara yakaiswa iyo inogona kuita zvisingaite uye nesimba kuita chinhu chimwe chete kare.
galaxy s7 inoshanda vs kumucheto
Yu-Gi-Oh! Duel Links Ongororo: A mobile kufungidzira kweiyo yakasarudzika TCG